[MMAnime] Casshern Sins : Casshern Sins
လူသတစွကွ(Casshern Sins) မငွးကိုငါသတမွယွ တဈခတွတဈေခါကအရမွးမိုကခွဲ့တဲ့animeအဟောငွးလေးတှထေဲကတဈခုကိုပှနသွှားလိုကကွှစို့ဗှာ။ ဒီလိုOld animeတှထေဲကမှှ Old but Goldတှမှော Casshern Sinsကလညွးမပါဘူးလို့ပှောလို့မရလောကတွဲ့အထိကောငွးတာပါ။ သူ့ရဲ့ဇာတလွမွးအနအထေားနဲ့ပုံစံကသာမနကွှညွ့ရငွ အုံ့မှိုငွးမှိုငွးနဲ့ပငွှးတိပငွှးတှဲလို့ထငကွောငွးထငနွိုငပွါတယွ။ ဒါပမယွေ့သခှောအခှိနပွေးပှီးကှညွ့မယဆွိုရငွ တဈပိုငွးနဲ့တဈပိုငွးမှာတကယနွကနွဲတဲ့ပုံစံတှေ ဘဝတှေ အဓိပပြါယတွှပေါနပေါတယွ။ နောကခွံတီးလုံးတှကလညွေးmain chaရဲ့ဇာတရွုပွ ဇာတလွမွးရဲ့ခှောကခွှားမှု တိမမွှှုပနွမှေုတှကေို စိတဝွငစွားဖို့ကောငွးအောငကွိုပို့ပေးနတောပါ။ ကဲ ညှှနွးတာမှားသှားပှီ ဇာတလွမွးအကှောငွးလေးစလိုကရွအောငွ......... တဈခါတဈရံမှာကိုယွ့လုပရွပတွှကေိုမေ့သှားတာမှိုး ကိုယဟွာဘယလွိုလူစားလဲ ဘာလုပတွဲ့သူလဲ လူတှကကေောကိုယွ့ကိုဘာကှောငွ့မုနွးနရတောလဲ ဘယလွိုအမှားမှိုးကိုသူတို့အပေါမွှာလုပခွဲ့မိလို့မုနွးနရတောလဲ နောကဆွုံး ကိုယဟွာဘာလို့မှား ဘာအတှကမွှား ဘာကှောငွ့မှားအသကရွှငနွရတောလဲဆိုတဲ့ခံစားခကှမွှိုး တဈခါတဈရံမှာခံစားဖူးကှလား....... အမှောငထွုတဈနရောကလူတဈယောကွ မိနွးမပှိုလေးရှေ့မှာပေါလွာခဲ့တယွ "ရှငဘွယသွူလဲ"ဆိုတဲ့မေးခှနွးတဈခုက မိနွးမပှိုလေးရဲ့ပါးစပကွနတေုနလွှုပစွှာနဲ့ထှကလွာခဲ့တယွ အမှောငထွုကနလေူလုံးထှကပွှရငွး "ငါဟာCasshernပဲ"ဆိုပှီးခပမွာမာအသံတဈခုနဲ့ပှနဖွှခေဲ့တယွ နောကတွဈခေါကွ...အေးစကမွှုတှနေဲ့ကှောကရွှံ့မှုအလငွှးမရှိတဲ့အသံနကနွကတွဈခုနဲ့ထပပွှောလိုကတွာက.... "Luna...မငွးကိုငါသတမွယွ!"ဆိုတဲ့ခပမွာမာစကားတဈခှနွး လှပလှနွးတဲ့မကှဝွနွးတဈစုံကနမကှရွေညတွှကရှငွေး........ အနာဂတကွာလမှာ ကမဘြာမှကှေီးဟာ အပကှအွစီးမှားနှငွ့ပှညွ့နှကနွတေဲ့အပှငွ ကနတြာရကှီးပုံစံဖှဈလာပှီး လူသားမှိုးနှယတွှဟောလညွး လုံးဝဆိုသလိုမှိုးသုဉွးပှောကကွှယသွှားပါတယွ။ နောကဆွုံးအသကရွှငကွနှရွှိတဲ့ အရာဆိုလို့ စကရွုပတွှပေဲကနှရွှိတော့တယွ။ စကရွုပတွှဟော ထာဝရအသကရွှငနွိုငကွှတယွ... Lunaဆိုတဲ့မိနွးကလေး အဲ့ဒီကမဘြာပေါကွမပှောကခွငအွခှိနအွထိပေါ့။ တဈနေ့မှာ Luna ကို Casshern လို့ခေါတွဲ့ စကရွုပကွ လုပကွှံသတဖွှတရွာကနေ ကမဘြာပကှကွပကွှီးတဈခုဖှဈတဲ့ "ပကှစွီးပှောကကွှယခွှငွး" ဆိုတာကှီးကစတငဖွှဈပေါလွာခဲ့တယွ.... တဈနညွးပှောရရငွ ဒီကမဘြာပကှကွပကွို စတငသွူက Casshernကှောငွ့ပါပဲ။ "ပကှစွီးခှငွး" ဆိုတဲ့အတိုငွး စကရွုပတွှရေဲ့ ခနဓြာကိုယတွှကလညွေး သံခှေးတကွ ပကှဆွီးမှုတှဖှဈပှေီး ဘယသွူကမှပှုပှငကွယဆွယလွို့မရအောငအွထိဖှဈလာခဲ့တယွ။ သို့သောလွညွးဒါတှကေိုCasshernတဈယောကနွားမလညနွိုငခွဲ့ဘူး။ Casshern ကအကှောငွးတဈမှိုးမှိုးကှောငွ့ "ပကှစွီးခှငွး" ဆိုတာကို မခံစားရတဲ့တဈဦးတညွးသောစကရွုပဖွှဈတဲ့အပှငွ ဖှဈပကှခွဲ့သမှှအရာအားလုံးကိုလညွးမေ့ပှောကနွတေဲ့သူပါ။ Casshern ကို စားရငမွသနေိုငဘွူး Casshern မရှိရငပွကှကွပကွှီးရပပွှီဆိုတဲ့ ကောလဟလတှကှေောငွ့ တခှားစကရွုပမွှားတှရေဲ့တိုကခွိုကခွှငွးကိုအမှဲလိုလိုခံနရတေဲ့ Casshern တဈယောကွ သူကဘာလဲ သူဘာကှောငွ့တညရွှိနတောလဲ ဒီပကှကွပကွှီးကကောသူလုပတွာဟုတရွဲ့လား သူမရှိရငဒွီပကှကွပကွှီးကတကယရွပသွှားမှာလား Lunaကိုကောသူတကယသွတခွဲ့တာလား Lunaကကောဒီလောကကှီးထဲမှာတကယမွရှိတော့ဘူးလား မေးခှနွးတှမရမေတှကေနွိုငအွောငမွှားပှားနတေဲ့Casshernတဈယောကဟွာ ဒီဟာတှရေဲ့အမှနတွရားကို စတငရွှာဖှပေါတော့တယွ.... 2008 က ထှကထွားပှီး IMDb 7.3/10 ရထားလို့ ကှညွ့ရတာ အရမွးတနတွဲ့ Anime series တဈခုဖှဈတဲ့အပှငွ မထငမွှတထွားတဲ့အလှညွ့အပှောငွးတှပေါဝငတွဲ့ တကယကွိုနကနွဲတဲ့ဇာတလွမွးတဈခုပါ ဒီဇာတလွမွးကိုတော့အပတစွဉွ တနငွလြာနေ့နဲ့အငွဂြါနေ့တိုငွး Mmanime(dot)orgမှာတငဆွကပွေးမှာဖှဈလို့ စောငွ့မှှောအွားပေးကှပါဦးခငဗွှ